Maayarka Hargaysa Oo Dacwad La Xidhiidha Social Madia Lagaga Oogayo Maxkamadda Gobolka Maroodijeex | Berberatoday.com
Maayarka Hargaysa Oo Dacwad La Xidhiidha Social Madia Lagaga Oogayo Maxkamadda Gobolka Maroodijeex
Hargeysa(Berberatoday.com)-Nin ka mid ah dadka deggan magaalada Hargeysa oo lagu magacaabo, Cabdi Duco ayaa sheegay in maayarka Hargeysa uu ku soo oogi doono dacwad ugub ku ah Soomaalida.
Cabdi Duco oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in maayarku uu matalo bulshada oo idil asaguna uu kuu ka mid yahay bulshadaas la doonayo in uu u adeego.
” Maayar markaynu leenahay maahan qof meel iska jooga, maayar waa qof matala bulshada magaaladaa uu ku noolyahay, baraha bulshada ee uu magaca dadweynaha ku kasbadanay waa wadaag oo waa lawada leeyahay”. Ayuu yidhi Cabdi Duco.
Waxa uu sheegay in maayarku uu bartiisa facebuugga ka saaray kaddib markii uu siyaasaddiisa dhaliilay
Mar la waydiiyey in maayarkuu uu xaq u leeyahay cidda uu bartiisa ka saarayo iyo cidda uu daynayo ayuu ku jawaabay.
“Baraha bulshadu waa meel la wada leeyahay, asaga maayar ahaanna waa hanti ay dadweynuhu leeyihiin”.
Waxa uu sheegay in ay jiraan dad badan oo loo xidhay wax ay halkaas ku qoreen oo aanu jirin xeer arrintaas ka yaal asaguna uu yahay qof shacab ah oo xaq u leh in uu helo xagta magaaladiisa.
Ninkaan ayaa sidoo kale sheegay in dacwaddaan uu qareen u qabsaday uuna doonayo in uu maayarka maxkamad la tiigsado.
“Anigu qof baan ahay shacab ah, xeer baa iga dhigay shacab, madaxweynaha iyo maayarkana xeer baa ka dhigay xeer baan xilalkan ay hayaan u dhiiba, qofka la ciqaabayo xeer baa ciqaabtiisa sheega ee maahan qofka rabitaaankiisa”.